Hiverina ve ny fivoriana? Afaka misokatra soa aman-tsara ve ny trano fandraisam-bahiny? ... Sa tokony hijanona ao an-trano isika?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hiverina ve ny fivoriana? Afaka misokatra soa aman-tsara ve ny trano fandraisam-bahiny?… Sa tokony hijanona ao an-trano isika?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Hiverina ve ny fivoriana? Afaka misokatra soa aman-tsara ve ny trano fandraisam-bahiny?… Sa tokony hijanona ao an-trano isika?
Hiverina ve ny fivoriana?
Mihaona amin'ny paradigma vaovao ny fizahantany
Hatramin'ny, ary anisan'izany ny fiandohan'ny taona 2020, matihanina maro amin'ny hotely, fizahan-tany ary fizahantany fizahan-tany no nanaiky fa “tsara kokoa ny lehibe kokoa.” Ny fangatahana dia namorona filàna hananganana sambo fitsangantsanganana lehibe kokoa, hotely maro samihafa sy fahasamihafana, kianja fanampiny ary ivon-toeran'ny fivoriambe, fiaramanidina haingana sy lehibe kokoa. Toa tsy nisy valindrihana ary tsy nisy sakana nisakana ny fanitarana ny indostria. Ny olona avy amin'ny firenena rehetra, na inona na inona vola miditra na asa, dia namporisihina hanao dia an-trano sy iraisam-pirenena, hitsidika namana, fianakaviana, hanatsara ny fanabeazana, hampitombo ny asa aman-draharaha ary hiaina traikefa nahafinaritra. Hatramin'ny pasipaoro ka hatramin'ny rafitry ny karatra fidirana manerantany dia natao hanafainganana ny besinimaro rehefa feno olona feno seranam-piaramanidina sy gara izy ireo. Ny fivezivezena tsy misy farany an'ny olona mifindra amin'ny hetsika iray mankany amin'ny iray hafa, avy amin'ny tanàna iray mankany amin'ny iray hafa ary avy amin'ny kaontinanta iray ka hatrany amin'ny iray hafa dia nitondra ranomasom-pifaliana ho an'ny mpitarika ny indostria satria ny fitomboan'ny farany ambany dia midika bonus lehibe sy fiarovana asa.
Ary ny risika?
Ny risika amin'ny dia dia efa nisy foana, na dia tsy anoloana sy eo afovoany aza. Mety hianjera ny fiaramanidina, mety ho voaroba tany amin'ny faritra lavitra amin'ny faritra iray ny taxi, MERS sy SARS ary ZIKA niteraka ahiahy ara-pahasalamana, fanapoizinana ara-tsakafo ary rano voapoizina nahatonga ny fahafahan'ny fivalananan'ireo mpandeha; na izany aza, tsy nisy ny risika nafana na hentitra loatra hampiatoana na hampihena ny fikatsahana fahafaha-manao dia lavitra aza.
Misaotra noho ny kanosa nataon'ny Sinoa sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) ary ny hadalan'ny tompon-trano ankehitriny, COVID 19, viriosy iray izay mety ho voafehy tsy misy fetrany manerantany (eritrereto ny MERS, SARS ary Zika) amin'ny Ny fitsangatsanganana an'izao tontolo izao kosa dia nanjary areti-mandoza, namorona fahatsapana loza lehibe, tsy fahatokisana ary tsy fifehezana ny vahoaka erak'izao tontolo izao, nametraka ny adihevitra momba ny fahasalamana eo an-tampon'ny fihaonambem-pirenena sy ny sehatra tsy miankina. Andriamatoa Trump sy ireo mpiara-miasa aminy dia namorona lozam-pifamoivoizana izay nanimba ny fiarahamonina, miaraka amin'ny voka-dratsy manimba mandritra ny fotoana fohy sy maharitra. Miavaka ity areti-mandoza ity satria nisy fiantraikany teo - tsy tamin'ny vondrom-piarahamonina na firenena iray na roa, fa ny planeta iray manontolo, miaraka amin'ny daty fiafarany tsy fantatra.
Fizahan-tany sy Nihilism
Ny mpitondra eran'izao tontolo izao izay, teo aloha, dia nifanohana, ankehitriny mifaninana amin'ny loharanom-pahalalana, mametraka ny filan'izy ireo eo alohan'ny ilain'ny hafa. Ny krizy dia atambatra ho an'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina noho ny loza ankehitriny sy ny ho avy tsy fantatra. Ny planeta iray manontolo dia miatrika zava-misy mibaribary izay manolotra kely na tsy misy fanantenana, mpitondra marefo (tsara indrindra), governemanta izay manandrana miasa sy mandray fanapahan-kevitra tsy misy fahalalana, ary amin'ny tranga maro, dia nolokoana tamina nihilism.
Ny vokany maharitra amin'ny COVID 19 dia tsy mazava; na izany aza, ny fihenan'ny toekarena eran'izao tontolo izao sy ny fotoana fohy, ny tsy fisian'ny fanararaotana vaovao eo amin'ny faravodilanitra, miaraka amina virus miovaova sy mihombo hatrany dia nampiharihary ireo fahatongavan'ireo fiarahamonina fohy eran'izao tontolo izao nanao toa ny fikajiana.
Fanazavana fa tsy valiny
Satria ny loharanon-karena eran'izao tontolo izao dia mbola tsy niomana amin'ny areti-mandringana (ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny politika, siantifika, toekarena, fitondram-panjakana ary fahasalamam-bahoaka) ny fifantohana dieny izao dia ny fananana ny fihanaky ny viriosy - miaraka amin'ny fiahiahiana manokana ny Mass Gatherings satria ireo fisehoan-javatra ireo dia heverina fa manolotra fanamby ara-pahasalamana ho an'ny daholobe izay tsy omanin'ny mpahay siansa sy ny governemanta na tsy vonona hiatrika izany.
Ara-tantara dia hetsika lehibe (politika, fanatanjahan-tena, fivavahana, mozika, orinasa) no loharanon'ny aretina mifindra izay niely eran'izao tontolo izao nefa tsy nahatratra ny hamafin'ny COVID 19. Ny mampiavaka an'io aretina io dia ny refin'ny olana. Ireo valanaretina teo aloha dia noresahan'ny mpitondra eran'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny drafitra iraisana, fanatsarana ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana, ary ny fepetra mialoha sy tsy azo atao ary fisorohana izay, amin'ny ankapobeny, dia nifehy areti-mifindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Goavana. Goavana. goavam-be
Betsaka ny olona
Ny famoriam-bahoaka dia nofaritan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) ho, "hetsika voaomana na ho azy izay ahafahan'ny isan'ny mpanatrika manelingelina ny loharanom-pahalalana sy ny valin'ny fiaraha-monina na ny firenena mampiantrano ny hetsika." Ny Center for Disease Control (CDC) dia nanaiky fa ny COVID 19 dia niparitaka tamin'ny vongan-tsofina navoakan'ny taovam-pisefoana rehefa miresaka, mikohaka, mievina ary mivazavaza ny olona. Azo inoana fa niparitaka teny amin'ny tanana avy amin'ny faritra maloto ilay viriosy ary avy eo niditra tao amin'ny orona, vava ary maso, ka niteraka aretina. Ny hany valiny, amin'izao fotoana izao, dia amin'ny alàlan'ny fisorohana manokana toy ny fanasana tanana, ny fanalavirana ny hafa (ao an-trano), ny haben'ny 6 metatra eo anelanelan'ny olona iray sy ny iray hafa, ary ny fanaovana saron-tarehy, ampiarahina amin'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina ny faritra rehetra.
Ny fivorian'ny besinimaro dia niteraka voka-dratsy ara-pahasalamana vao haingana tamin'ny fampandrenesana iraisam-pirenena anisan'izany (fa tsy ferana fotsiny): ny Olaimpika Ririnina Vancouver 2010 (H1N1 gripa)); ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany FIFA 2010 tany Afrika Atsimo (gripa grika H1N1); ny fiadiana ny amboara nasionaly baolina kitra nasionaly afrikanina 2015 tany Guinea Ekoatorialy (aretina otrikaretina Ebola); ny Lalao Olaimpika 2016 (Zika virus); na izany aza, tsy nisy nahatratra ny maha-matotra sy saro-pantarina ny SARS CoV-2, notaterina avy tany Sina tamin'ny taona 2019-20 ho toy ny pathogen nampitaina tamin'ny lalan'ny taovam-pisefoana nitarika ny aretin'ny COVID 19.
Mandehana na tsia
Satria ny famoriam-bahoaka dia miteraka fidiram-bola marobe ary miteraka dokambarotra be dia be ary manatsara ny fifandraisan'ny besinimaro amin'ilay toerana (ny toerana haleha sy ny mpandray anjara), navela ny hetsika voalahatra talohan'ny COVID 19. Ireo mpikarakara toerana, ary koa ny filaminan'ny governemanta, ny fahasalamam-bahoaka ary ny mpanolo-tsaina ny fiarovana dia niomana tamin'ireny hetsika ireny niaraka tamin'ny famatsiana vaksinina, fanafody, mpitsabo matihanina miaraka amin'ny rafitra fanalefahana sy fomba fiasa mifototra amin'ny traikefa. Mampalahelo fa ny valin-kafatra (mahonena) nataon'ny governemanta manoloana ny fahafahan'ny otrikaretina Covid19 dia namindra ny areti-mandringana tamin'ny hafainganam-pandeha mahagaga.
Mazava fa ny fanekena kamo sy ny fanekena tara ny zava-misy fa ny famoriam-bahoaka dia mamorona tontolo tonga lafatra amin'ny fanaparitahana viriosy - dia nanery fivoriambe, fihaonambe ary fivoriana tany Zoom sy ireo safidy an-tserasera hafa.
Very an'arivony tapitrisa
Ny hetsi-bahoaka dia nofoanana na nahemotra dia misy ny London Marathon izay mazàna manome vola mihoatra ny 100 tapitrisa pounds (125 tapitrisa dolara amerikana) ho an'ny toekarena UK. Izany koa dia kapoka nahazo ilay mpilatsaka an-tsitrapo Richard Branson izay nanohana ny hetsika tamin'ny alàlan'ny Vola Vola nanomboka tamin'ny 2010. Taylor Swift sy Sir Paul McCartney dia nokasaina hanao fampisehoana tao amin'ny festival mozika ivelany lehibe indrindra any Angletera talohan'ny nanesorana azy. Ny Glastonbury dia manome 50 tapitrisa pounds ($ 62 tapitrisa) isan-taona amin'ny varotra tapakila fotsiny (haverina ny saram-bilany). Ny fivarotana ny fividianana eo an-toerana, ary koa ny fandaniana eo an-toerana, dia hampisy fatiantoka fanampiny mitentina 100 tapitrisa pounds ($ 125m). Satria ny Fetiben'ny Glastonbury dia manome vola sahabo ho 1 tapitrisa pounds (1.24m) tombony ho an'ny fikambanana fiantrana ao an-toerana, ireo tsy mitady tombombarotra ireo dia hahita fidinana fohy amin'ny volan'izy ireo amin'ity taona ity noho ny fanafoanana.
Wimbledon, ny fifaninanana tenisy malaza eran-tany dia nandrasana fatiantoka 200-pounds ($ 249.4 m) tamin'ny alàlan'ny famerenam-bola, mpanaparitaka ary mpanohana. Ny vaovao tsara amin'ity hetsika ity dia ny politikam-piantohany izay nahitana areti-mifindra. Ny klioba dia afaka mitaky vola sahabo ho 100 tapitrisa pounds ($ 125m) ho fanonerana ny fatiantoka. Ny British Lawn Tennis Association dia hahazo tombony ihany koa na eo aza ny fanafoanana satria mbola hahazo ny vola 40 tapitrisa pounds ($ 50m) isan-taona avy any Wimbledon.
Ny Herinandron'ny lamaody any London matetika dia miteraka tombony farafaharatsiny 269 tapitrisa pounds ($ 333.8m) ho an'ny tanànan'i Londres, ao anatin'izany ny vola miditra amin'ireo tompona hotely sy tompona trano fisakafoanana eo an-toerana ary koa ireo toerana natokana ho an'ny fampisehoana, miaraka amin'ny hetra fanampiny an'ny orinasa sy vola amin'ny fivarotana antsinjarany voatoto. amin'ny toekarena ataon'ny mpitsidika. Nampihetsi-po an-tserasera ny hetsika, ary mbola afaka mahita ny lamaody ny mpanaraka, saingy very ny fahazarana mandany lafo be an'ny mpanatrika am-paosy ny Tanàna Londres.
Ny lalao Olaimpika Tokyo 2020 dia nitentina $ 12.6 miliara dolara hamokarana ny firenena raha toa kosa ka nanafoanana $ 2.7 miliara dolara ny fanafoanana satria tsy maintsy tazonina ireo vohitra noforonina manokana, tsy maintsy omena ny mpiasa, ary toerana maro no tsy maintsy averina hamerina.
Ny hetsika fanampiny nofoanana na nahemotra dia misy ny fiadiana ny tompondakan'i Football Association of Football Football Euro 2020; ny Formula 1 Grand Prix any Shina; ny fiadiana ny tompondakan'i National Six amin'ny rugby tany Italia sy Irlandy; Hetsika mendrika amin'ny ady totohondry Olaimpika; ny Kongresy Iraisam-pirenena finday any Barcelona ary ny Umrah any Arabia Saodita.
Ho an'ny vondrona kely kokoa, ny hetsika isan-taona dia mety ho hany fotoana tokana ahazoana fidiram-bola, ahafahan'ny fidiram-bola mandritra ny taona iray iasana. Ny vola lany nandritra ny drafitra dia mety tsy haverina mihitsy. Ny fandaniana lany dia ahitàna ny drafitra, ny saram-pampiatrana ary ny toeran'ny toeram-pivarotana ary ny fitaovana marketing izay tsy azo averina. Ny trangan-javatra lehibe kokoa dia mety hisy fiantohana hiverina, fa ny kely kokoa - ny hetsika miorina amin'ny fiarahamonina dia mety tsy hanana an'io fotoana io.
Ankoatra ny risika: fifandraisana amin'ny daholobe
Amin'ny tranga maro, ny fivoriana marobe dia nofoanana na nafindra tamin'ny Internet, tsy ho fiheverana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamam-bahoaka ihany, fa noho ny fahitana ireo fisehoan-javatra ireo tamin'ny alàlan'ny tombotsoan'ny haino aman-jery sy ny fandraisana anjaran'ny besinimaro / politika ary ny andrasan'ny mpanjifa. Raha navela hitohy teo amin'ny sehatra manerantany ireo tranga ireo, naneho mazava tsara ny fotoana mety hampielezana ny aretina manerantany, dia henjana sy tsy nijanona ny valim-bahoaka. Noho izany - noho ny tahotra, ny tsy fahatokisana, ary ny ahiahy amin'ny tsy fahombiazana, miampy ny angona azo sy tsy mitsaha-mitombo izay mampiseho fa ireo fisehoan-javatra ireo dia lovia Petri ho an'ny fihanaky ny viriosy, noheverina fa malina tsy hamokatra ireo hetsika ireo - mivantana - amin'ity taona ity .
Ny manohy manakorontana ny toe-draharaha dia hoe, manoloana ny dokambarotra rehetra, ampiarahina amin'ny fanambarana nataon'ny mpahay siansa, tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka, mpitarika orinasa ary vondrom-piarahamonina, dia mbola dodona ny hanatrika hetsika ny olona, ​​mitady izay fotoana azo heverina ho “ambanin'ny tany , ”Ary, amin'ny toe-javatra sasany, amin'ny toerana voafaritra fa tsy azo antoka, na dia ao anatin'ny toe-javatra tsara indrindra aza.
Mpankafy an'arivony no nametraka hazakazaka tany South Dakota tato ho ato na eo aza ny fitomboan'ny isan'ny trangana virus coronavirus voarakitra an-tsoratra ao amin'ny fanjakana. Ny Huset's Speedway, nikatona nandritra ny taona maro, dia nisokatra indray ary olona 9000 no nifatratra tao amin'ny seza izay saika tsy nisy saron-tava. Ny valin'ny hetsika? Notaterin'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana 88 ny tranga vaovao ary iray ny maty.
Ny CDC dia nitatitra fa tamin'ireo mpanatrika 92 tao amin'ny fiangonana Arkansas ambanivohitra iray nandritra ny 6-11 martsa dia 35 (38 isan-jato) no nanamboatra Covid 19 nohamafisin'ny laboratoara ary olona telo no maty. Ny tahan'ny fanafihana avo indrindra dia tamin'ny olona 19-64 taona (59 isan-jato) ary +/- 65 taona (50 isan-jato). Tranga 26 fanampiny mifandray amin'ny fiangonana no nitranga tao amin'ny fiarahamonina, anisan'izany ny fahafatesana iray.
Tao amin'ny County Skagit, Washington, mpikambana 45 amin'ny famerenan'ny amboarampeo olona 60 no narary COVID 19. Tsy nisy naneho soritr'aretina talohan'ny nanatrehany ny famerenana ary tsy nisy tranga fantatra tany amin'ny distrika, na dia efa nisy tranga hita tany Seattle akaiky teo.
Tany Austin, Texas, mpianatra 28 amin'ny 70 izay namandrika fiaramanidina ho any Mexico mba hialana sasatra amin'ny lohataona no voaporofo fa voan'ny virus io.
Tany Georgia, 200 ny mpisaona nivory hanatrika fandevenana ary havana aman-jatony sy mpandray anjara am-polony maro no tonga voan'ny virus.
Any New Rochelle, NY, 90 taonath fitsingerenan'ny andro nahaterahana, notsaboina ny mpandray vahiny ary marary valo no narary, anisan'izany ny ray aman-dreny, ary maty ny mpanatrika roa.
Ny hetsika dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainam-piarahamonina ary manatrika fety sy hetsika be dia be manome tombony ho an'ny olona sy ny toerana haleha. Nasehon'ny fikarohana fa ny fanatrehana fety dia mifandray amin'ny fahatsapana fifandraisana ara-pientanam-po ary ny traikefa ifampizarana dia mampivelatra vondrom-piarahamonina matanjaka sy mateza kokoa.
Ny psikology ara-tsosialy, Sonja Lyubomirsky, dia nahita fa tsy maninona na introvert na extravert ianao, ny fifandraisana amin'ny olon-kafa dia toa miteraka fahatsapana fiadanam-po. Ny psikolojia amin'ny fanatrehana hetsika lehibe dia ahafahan'ny tsirairay mitsahatra amin'ny maha-"solo" azy ary avela hanana famantarana ara-tsosialy mifototra amin'ny vondrona.
Misy ny fiovana ara-dalàna: ny olona dia miova avy amin'ny fihetsika arakaraka ny finoany sy ny soatoavina maha-izy azy manokana ho an'ny finoana sy soatoavina mifototra amin'ny vondrona, mihetsika, "toy ny hoe" festival – goer na mpankafy izy ireo. Misy koa ny fiovan'ny fifandraisan'ny olona: ny olona mamaritra ny tenany amin'ny lafiny maha-izy azy ara-tsosialy ary mahita ny hafa ho mizara ny maha-izy azy eo amin'ny fiaraha-monina, ka mahatonga ny fifandraisana ho akaiky kokoa.
Ny fikarohana sasany dia mampiseho fa ny mpikambana ao amin'ny vondrona dia nanjary niara-niasa bebe kokoa, nanaja, natoky, nanampy ary nanampy ny hafa ary nanomboka nizara vondrona iray izy ireo namantatra ny famelana ny haavon'ny toerana akaiky ara-batana, ka nahatonga ny "be olona" ekena. Ny fahatsapana ny fifandraisana akaiky sy ny fanohanana dia manampy amin'ny fihetseham-po miabo fatratra izay mampiavaka ny hetsika marobe.
Tany am-piandohan'ny areti-mandringana dia nanome fampitandremana ny Centre for Disease Control (CDC) amin'ireo vondrona lehibe kokoa noho ny 250 raha toa ka tsy misy vondron'olona fantatra any amin'ny faritra iray. Nihena ho 50 ny isa avy eo, ahena vetivety hatrany amin'ny farafaharatsiny 10. Miombon-kevitra ny mpahay siansa sy ny manam-pahaizana momba ny fahasalamam-bahoaka fa tsara kokoa ny manavakavaka ny tsirairay; na izany aza, tsy zava-misy izany ary ny fitazonana vondrona vitsy dia afaka mampihena ny isan'ireo olona tsy voan'ny tsimok'aretina.
Ny tompon'andraikitra sasany amin'ny governemanta dia nanaraka ny siansa ary nihavitsy ny faribolana: tsy misy fisakafoanana anaty trano, fanafoanana ny daty filalaovana, fisorohana bara sy fivoriambe ara-tsosialy, miasa any an-trano… miaraka amin'ny tanjona hialana amin'ny olon-kafa.
Tsy misy valiny marina
Tsy misy isa majika azo antoka ho an'ny fivoriana, araka ny filazan'i Samuel Scarpino, mpahay siansa amin'ny rafitra sarotra sy manam-pahaizana momba ny modelina amin'ny areti-mifindra avy ao amin'ny Northeheast University any Boston, MA. Na dia kritika aza ny fihazonana ireo vondrona ho bitika, dia misy ihany koa ny fiheverana hafa ao anatin'izany ny taona, ny toe-pahasalamam-pahasalamana, ny fiovan'ny toetran'ny virus sy ny fiasa ara-tsosialy. Ny fomba fivelaran'ny olona amin'ny vahoaka dia afaka manova ny fomba fandehanan'ny viriosy amin'ny vondrona iray. Amin'ny toe-javatra sasany, tsy ny haben'ny vondrona izy io fa ny fifamatoran'ny olona sy ny fotoana lanin'izy ireo eo akaikin'ny vahoaka.
Tao amin'ny 2018 dia nisy fanadihadiana iray momba ny hetsika tamin'ny alàlan'ny London Underground misy isa momba ny aretina voan'ny gripa voangon'ny Public Health England. Ambony kokoa ny tahan'ny aretina any amin'ny faritra tena be mpampiasa ny rafi-metro, tsy hoe satria betsaka ny olona mandalo fa mandalo miadana kokoa izy ireo, ka nahatonga azy ireo nandany fotoana bebe kokoa tao amin'ny gara ary nifandray akaiky tamin'ny olona maro kokoa (eritrereto ny valalabemandry nandany ora maro tototry ny seranam-piaramanidina amerikana taorian'ny fametrahana ny lalàna momba ny fanaraha-maso).
Fitarihana olona marenina
Covid 19 dia namonjy ny ainy, ny aretina mitohy, ny tsy fananan'asa, ny fianakaviana vao nahantra, ny tsy fananan-trano, ny famoizam-po ary ny famonoan-tena mihamitombo ho an'ny mponina eran'izao tontolo izao, saingy toa tsy nisy na inona na inona nanetsika ny fanjaitra raha ny momba ireo mpanao politika marenina sy mpitarika orinasa. Tsy misy olona, ​​eo amin'ny tontolon'izao tontolo izao, toa miatrika ny famongorana ny Covid 19 sy ny fikajiana izay hitarika amin'ny famerenana amin'ny laoniny, hamerina ny toekarena eran'izao tontolo izao.
Vehivavy. Eo aloha sy afovoany
Any Etazonia, miandry elatra, dia mety ho mpitondra eran'izao tontolo izao, ao anatin'izany i Kamala Harris, Elizabeth Warren, Val Deming, ary Tami Duckworth. Amin'izao fotoana izao izay mangetaheta fitarihana izao tontolo izao dia gaga ireo vehivavy ireo, tsy afaka nahazo ny fandrakofana momba ny haino aman-jery sy ny fanohanana ara-bola ilaina hitondrana ny eritreriny sy ny heviny eo amin'ny sehatra afovoany. Mampalahelo ho antsika rehetra ny tsy fanarahana ny antson'izy ireo.
Mety ho tsara kokoa ny lehibe kokoa
Afaka manantena sy mivavaka ary hivoaka amin'ny latsa-bato isika, mba - amin'ny farany, amin'ny volana novambra 2020, ny mpitarika vaovao dia hanokatra làlana mankany amin'ny ho avy ary afaka hihaona amin'ny namana misotro sy misakafo hariva indray isika, manatrika fampirantiana eran-tany, lomano amin'ny dobo hotely, miantsena amin'ny varotra santionany ary mifangaro amin'ny tranombakoka. Ny famoriam-bahoaka dia tontolo manerantany miaraka amin'ny tontolo ratsy indrindra.
Ny ampahany amin'ny ankehitriny misy antsika dia tsy tokony hanadino ny maha-zava-dehibe ny hetsika lehibe. Ny tena ilaina dia ny fahatakarana tsara kokoa ny fitsaboana, ny fiaraha-monina ary ny psikolojia amin'ny kaonferansa, ny fivoriambe ary ny kaonseritra, mba hahazoana antoka fa ny fandanjana dia tendrena avy amin'ny ratsy indrindra ka hatramin'ny tsara indrindra.